WARAABINTA TUBOOYINKA: KUWAAS OO AH KUWA FIICAN IYO KUWA KA WANAAGSAN - BEERTA
Sida loo doorto tuubo loogu talagalay waraabinta: noocyada iyo astaamaha goobaha beerta
Waa wax aan suurtagal ahayn in la qiyaaso dhirta caleemaha caafimaadka leh iyo quruxda leh iyada oo aan la siin waraabin dheeri ah, taas oo lagu fuliyo dabeecad ayadoo la adeegsanayo tuubooyin. Waxaa jira noocyo farabadan oo kala duwan oo kala duwan oo aan u muuqan kaliya muuqaalka laakiin sidoo kale tayada. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa waxa ka wanaagsan ee lagu dooranayo tuubo loogu talagalay waraabinta, sida loo xafido oo u shaqeeyo.
Noocyada tubooyinka waraabinta: sida loo doorto waxyaabaha
Bakhaarada casriga ah iyo beeraleydu waxay sii kordhayaan si ay ula tacaalaan tuubooyin waraabka ah, iyo su'aasha mid ka mid ah ay ka wanaagsan tahay waxay noqoneysaa mid sii kordheysa. Wixii wax soo saar ee tuubooyinka beerta ee waraabinta iyadoo la isticmaalayo dhammaan qalabka jira. Ku saabsan sida iyo kan kan ka fiican oo loo doorto, waxaan ka hadli doonaa dheeraad ah.
Tuubada caaga ah
Markaad ka fekereyso waxa ugu fiican ee tuubada biyaha, dadka badanaa waxay ka fikiraan tuubooyin ka samaysan caag. Tani waa sababta oo ah aalado caag ah ayaa leh faa'iidooyin ka badan tayada taban, oo ka mid ah:
Ka hortagga UV;
caabbinta heerkulka heerkulka;
Adkee cadaadiska laga bilaabo 1 illaa 10 jimicsi;
la heli karo.
Sida muuqaalada taban, waxaa habboon in la xasuusto qiyaasta ballaaran ee tuubada, way adagtahay in laga guuro meel ilaa meel, laga bilaabo beerta ilaa beerta. Inta badan, tuubooyinka ka samaysan caag sun ah ayaa intooda badan laga heli karaa dukaamada gudaha: ma sameyn doonaan waxyeelo geedka, laakiin sida ilaha biyo cabista xoolaha, waxaa habboon in la isticmaalo tuubooyinka leh calaamad gaar ah.
Ma taqaanaa? Jilicsanaanta caagga ah ee tuubada laga sameeyo, muddada dheer waxay socon doontaa.
Waraabinta dalka waxaa laga samayn karaa tuubo laga sameeyey PVC, taas oo ah miisaaniyad iyo qalab fudud. Waxyaabaha ugu horeeya ee lagu fiirsado marka la dooranayo tuubada PVC waa tirada lakabyada. Su'aashani waa aasaas, sababtoo ah tuubooyinka lakabka hal mar ayaa sii socon doona wax ka badan hal sano, qaabkooda iyo qaab-dhismeedkoodaba waa la bedelay. Marka laga hadlayo khadadka PVC-ga, su'aasha ah waxa la xiro tuubada xoojinta ayaa badanaa la kulmaa. Jawaabtu waa ganaax: waa isla tuubada PVC, oo kaliya dhowr lakabyo, oo leh qaab dhismeed oo xoog leh. Xirmiyadani waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo badan, sababtoo ah waxay sii socdaan wakhti dheer oo ay u badan yihiin kuwa u adkaysta kala duwanaanta heerkulka iyo cadaadiska.
Waa muhiim! Haddii aad horay u dooratay tuubada xoojinta ee waraabka, waxaa fiican inaad iibsato tuubooyin leh gacmo-gacmeed, sababtoo ah xoojinta isdhex-galka ah ayaa barara ama burburin kara.
Haddii aad rabto inaad dooratid tuubada biyaha ee fiican, sidoo kale fiiro u yeelo tuubooyin ka sameysan naylon. Nylon lafteedu waa qalab aad u fudud, taas oo macnaheedu yahay in tuubada ka timid qalabkani ma noqon doonto mid aad u weyn, waxayna u fududaan doontaa in la wareejiyo. Faa'iido kale oo ka mid ah tuubada nylon waa dabacsanaan iyo cimri dherer: waa sahlan tahay in la isku rogo. Sida caqabadaha, mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waa xasiloonida heerkulka iyo cadaadiska, taas oo ah sababta ay suurtogal u tahay inay si firfircoon uga faa'iidaystaan ​​oo keliya laba xilli.
Tuubada caagga ah
Tuubbooyinka caagga ah ee biyaha maaha kuwa ugu caansan sababtoo ah wax-qabadkooda: waxay aad u dhaqsaha badan yihiin oo si sahlan u shaqeynayaan - marka ugu yar ee la jeexjeexo. Waxa kale oo laga jaraa tuubooyinka noocaas ah waa dulqaad la'aanta kala duwanaanshaha heerkulka. Neefsashada waa "saxda ah" ee tuubada caagga ah. Cadaadiska biyaha ee tuubo noocan oo kale ah waa inuusan ka badneyn 5 bar. Faa'iidooyin yar oo ka mid ah tuubooyinka caagga ah ayaa weli "faani kara": waxay yihiin nalal iyo muuqaal qurxoon oo ka badan kuwa kale.
Tuubbada Wonder - caawiye weyn xagaaga ama beerta. Waa sahlan oo wacan tahay in la isticmaalo. Tuubanku waa mid aad u jilicsan, hase yeeshee marka xiritaanka la kordhiyo qiyaasta ilaa 3 jeer.
Ma taqaanaa? Celcelis ahaan, tuubo noocan oo kale ah waxay leedahay 7 nooc oo biyo ah.
Tuubada mucjisada ah waxaa lagu sameeyey maaddooyin aan lahayn dillaac, xitaa haddii ay ku sii socoto, ma aha mid xejin ama jaban. Waxay u adkaysatay heerkulka iyo cadaadiska. Xaqiiqdii, tuubadu waxay ku xirantahay qadar ahaan, sababtoo ah ka dib joojinta biyaha, waxay "isu-ururinaysaa" ansixinta. Qalabka ay ka sameeyaan tuubooyin cajiib ah, oo ah: tuubada jilicsan, caag tayo sare leh iyo dhar adag oo la isku qurxiyo, ma yareynin waxayna kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho qalabka sanado badan.
Tuubbooyinka silicoon ee waraabka ayaa si ballaaran loo isticmaalaa beerta, sababtoo ah helitaanka iyo dabacsanaanta. Tayo xiiso leh oo ah tuubooyin silikoon ah ee waraabka beerta iyo beerta dalaggu waa awoodda derbiyada tuubada si ballaariyo qorraxda. Daboolka Silikonka waxaa loo isticmaali karaa heerkulka laga bilaabo -20 ilaa +40 ° C Tuubada silikiciga leh cadaadis sarreeya oo biyo ah ayaa qarxi kara, sidaa daraadeed waxa fiican inaad u isticmaasho waraabinta sariiraha "by culayska."
Waa muhiim! Ka hor intaadan dooran tuubada biyaha lagu waraabiyo beerta ama beerta, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo kala saaro tuubada silikoonta ee PVC. Inta u dhexeysa iyaga waxaa jira isbeddel asaasi ah: tuubada silikooniga ah ma qallafsan yahay.
Astaamaha ugu muhiimsan ee tuubada biyaha
Doorashada tuubada loogu talagalay waraabinta kuma dhammaato oo kaliya xulashada alaabta saxda ah oo laga sameeyo tuubada, laakiin sidoo kale waxaa ku jira dhowr sifooyin kale, sida:
dhexroor iyo dherer;
Sida loo doorto dhexroorka iyo dhererka tuubada beerta
Soo qaado dhererka tuubada waraabinta waa mid sahlan: waxaad u baahan tahay inaad qiyaasto fogaanta ka timaadda ilaha biyaha ilaa goobta waraabinta, oo isu geynaysa tirada natiijada keentay. Sida dhexdhexaadiyaha tuubada loogu talagalay waraabinta, halkan waa lagama maarmaan in laga sii wado cabbirka tuubada kaas oo biyo la siin doono. Xirmooyinka beerta leh dhexroor 13mm ama 1/2 inch, ama 19 mm, ama 25 mm ayaa inta badan la isticmaalaa. Isticmaal tuubooyin noocaas ah oo la socda rakibayaasha.
Ma taqaanaa? Soo qaado dhexroor ka weyn kan loo baahan yahay, ha yeelin: ma kicineyso waraabinta, iyo haddii cadaadiska biyaha uu daciif yahay, waxay hoos u dhigeysaa helitaanka biyaha.
Raacitaanka xaaladaha heerkulka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato marka aad dooranayso tuubo
Mid kasta oo ka mid ah tuubooyinka waxaa loo isticmaali karaa heerkul gaar ah. Tusaale ahaan, tuubooyinka ka samaysan PVC waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee dhirta, iyo hadda heerkulka ka hooseeya 5 digrii waxay u muuqdaan kuwo baddan. Tuubooyinka caaga ah ayaa ah kuwo xasilloon, waxayna si ammaan ah u wareejinayaan heerkulka -30 ilaa + 90 ° C.
Sida loo xisaabiyo cadaadiska shaqada ee waraabka
Si aad si sax ah u xisaabiso cadaadiska shaqada ee waraabka, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid inta uu cadaadisku saarayo bamka. Halkaan waxaa ku yaal shuruudahan marka la dooranayo tirada lakabyada. Lakabka tuubada mid kasta wuxuu ku darayaa 4 xabbo dheeraad ah si ay awoodeeda u hesho.
Waa muhiim! Kuwa ugu adkaysi badan waa haadyo badan oo xoojiyay, waxay awoodaan inay adkeeyaan cadaadiska ilaa 40 bar.
Sidee ayaa daahfurka tubaakadu u saameeyaan waraabinta
Hufnaanjinta tuubadu ma saameynayso geedi socodka waraabinta sida ay ku sameeyaan tayada biyaha ee aad biyaha ku dhajisid dhirtaada. Meelaha la isku qurxiyo, biyaha ayaa la kulmaa heerkul ka badan inta lagu jiro caleenta cufan, opaque, iyo algae iyo foomka kaydka gudaha tuubada, taas oo ka dhufta biyaha oo soo saaraan ur aan fiicnayn. Sidaa darteed Way ka fiican tahay in la doorto tuubada opaque ee waraabinta.
Xaaladaha noolaanshaha iyo kaydinta ee tuubada beerta
Nolosha adeegga ugu dheer waa tuubooyin caag ah, kaas oo, haddii si fiican loo keydiyo, waxaa loo isticmaali karaa ilaa 20 sano. Qalabka adkaysi-badani waa tuubooyinka caagga ah iyo tuubooyinka PVC, kuwaas oo si sahlan u gudbaaya. Inta lagu jiro qalliinka, cadaadiska la oggol yahay ee tuubada waa in aan la dhaafin, iyo sidoo kale isbedelka muuqda. Si ay haadku uhogaansamaan inaad "ku farxaan" godadka guga, xilliga qaboobaha waxay u baahan yihiin in lagu qariyo meel laga ilaaliyo jiirka. Waxaa ugu fiican ee tuubada si ay u habboon shelf, ku yaalla 30-50 cm kor ku xusan heerka dhulka, waa suurad wacan in ay kala duwan, iyo kiis kasta ha gelin walax culus on tuubada. Waxaa fiican inaad ku xirto tuubada oo la duubay, taas awgeed waxaad isticmaali kartaa qolalka guryaha lagu sameeyo ama iibsato kuwa diyaarka u ah.
Sida aad u arki karto, iyadoo si habboon loo xakameynayo, xitaa qalab aan fiicnayn, sida tubada beerta, waxay u adeegi kartaa si daacad ah sannado badan, iyo noocyo badan oo aad doorato midka adiga kugu habboon.
Noocyada ugu caansan ee aconite
Caan ku ah koritaanka gudaha Dracaena: dagaalka lagula jiro cudurada iyo cayayaanka
Waa maxay farqiga u dhexeeya keega iyo cuntada
Sidee muhiim u yihiin fungicides for baradho?
Rose "Suuqa": sifooyinka, talooyin ku saabsan sii kordhaya
Dhirta Apple geedka
Beeralayda daaqada casriga ah ee geedi socodka digaagga taranta ee barxadda, inta badan waxay door bidaan jihada hilibka-ukunta. Shimbiraha noocan oo kale ah waxay leeyihiin wax soo saarka sare, marka lagu daro, waxay qaadaan ukumo wanaagsan waxayna leeyihiin hilib tayo sare leh. Caanaha Amroks wuxuu si gaar ah ugu caan baxay beeralayda Ruushka. Kobcinta shimbiraha cajiibka ah iyo daryeelka iyaga ayaa looga doodi doonaa maqaalkan. Read More
Ginger ragga loogu talagalay caafimaadka dadka: maxaa faa'iido leh, daaweeyntiisa, waxa loo kariyo, sida loo isticmaalo